Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Football jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NHL Jerseys Cheap Jerseys From China Cheap MLB Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys अचानकको दशैं | काव्यालय
अचानकको दशैं | संस्मरण | काव्यालय - Kavyalaya | विकास रोका मगर
by विकास रोका मगर कार्तिक ८, २०७७
मौसम एक्कासि चिसो भएर आयो, प्रचण्ड घाम न्यानो । घरखेत कुहिरोले घेर्न थाल्यो । घरछेउको सानो पोखरीभरि सेताम्मे कमल फूल फुल्न थालिसकेछन् । एउटा संकेत त गजबैले पाइयो – यो दशैंको मौसम हो ।
अचानक दशैं आयो । यस वर्ष त नआउनु थियो कि ! तर आइहाल्यो । एकवर्ष लामो ‘दिन’ पर्खाल नाँघेर आयो । अरुदिन कता लुकेर बस्छ कुन्नि ? थाहा छैन । तर खेतमा धानको बाला झुल्न थाल्यो भने दशैं आउँछ । प्रचण्ड गर्मी हटेर बिस्तारै शीतल मौसम हुँदै गर्दा दशैं आउँछ । यस वर्ष अघिल्ला वर्षमाजस्तै हल्ला गर्दै आएन । मालश्रीको धुनमा आएन । तर दशैं आयो । अचानक आयो ।
यसपाली फरक भइदियो । दशैं अचानक आइदियो । थाहा छैन कसरी-कसरी तर अचानक नै आइदियो । नआउनु थियो आइहाल्यो । एकवर्ष लामो ‘दिन’ पर्खाल नाँघेर पनि कम्तिमा दशैं मेरा लागि अप्रत्याशित रुपमा आइदियो ।
उसो त ‘मलमास’को बहानामा यसपाली केही ढिलो नै दशैं आएको हो । तिहारको देउसीभैलो खेल्नेबेला अँध्यारो कोठामा जमरा लगाउने दिन त भर्खरै आएको छ । र, पनि यसैउसै दशैं क्या छिटो आइदियो ।
ठूलो थिइनँ । जब म स्कुलमा पढ्थेँ । सरकारी स्कुलको फटाहा विद्यार्थीमा गनिने भएकाले कहिल्यै ज्यानभन्दा गह्रौं किताब बोकर स्कुल गइएन । त्यसमा पनि गाउँको स्कुल । कक्षाको पनि पहिलो विद्यार्थी । गाउँको स्कुलमा केही जान्ने हुनु सबै-सबै सुविधाको भोग गर्न पाउनु पनि हो ।
बाल्यकालको दशैं सम्झन्छु – हेडसरको कोठामा ङिच्च गरेर बसेको क्यालेन्डरमा दशैं खोज्थेँ । बिस्तारैबिस्तारै आउँथ्यो । असोज लाग्यो भने दिन पनि लामालामा हुँदै गएजस्तो हुन्थ्यो । तर वास्तविकता त्यो थिएन, बरु छोटिँदै जान्थ्यो ।
हेडसरको कोठामा बसेको शैक्षिक क्यालेन्डरमा दशैंको नाममा एक महिनाको रातो रङ लगाइएको हुन्थ्यो । हुन त रातो रंग क्रोधको भन्छन् । डरको भन्छन् । गलत अर्थ लगाउँछन् । स्कुले विद्यार्थीका लागि क्यालेन्डरको कालो रंगभन्दा रातो रंग नै कति हो ठीक हुँदो रहेछ ।
मैले भोगेको छु – शैक्षिक क्यालेन्डरमा रातो रङ हुनु भनेको बिदाको दिन हुनु हो । छुट्टीको दिन हुनु हो । रातो रङको दिन अर्थात् साथीभाइसँग टाढाको खोलामा पौडी खेल्न जाने दिन । लुकेर तीनपत्ती खेल्न जाने दिन । नाकले सुँघेर हुन्छ कि, आँखाले देखेर हुन्छ कि साथीभाइलाई गुहारेर हुन्छ कि अरूको घरमा बेलौती (अम्बा), काँक्रा, अमिलो या अमला चोर्न जाने दिन ।
राजेश हमाल, निरुता सिंह, रेखा थापा, बिगशो, जोन सेना, मार्क ह्यानरी या फिल्म पोस्टर भएको सानो आकारको पोस्टकार्ड खेल्ने दिन । गुच्छा या चुंगीको जोड कि बिजोड खेल्ने दिन ।
शनिबार हुन्थ्यो बिदा । तर पर्खाइ आइतबारदेखि नै हुन्थ्यो । आइतबार कक्षामा पाइला राख्ने बित्तिकै सोचिन्थ्यो,‘शनिबार फलानो फलानो काम गरेर बिताउनु पर्ला !’
सबैभन्दा गाह्रो काम हुन्थ्यो नुहाउनु । बडो दु:खको कुरा कहिल्यै आफ्नो शनिबारे योजनामा पारिएन – चिसो पानीले नुहाउँछु भन्ने । तर सधैँ त्यही योजना नभएको काम ‘जब्बर’जस्ती गर्नुपर्थ्यो । एकपटक नुहाएपछि हप्ता दिनलाई पुग्थ्यो । सायद यही त थियो बालापनको मजा भन्नु !
अहिले पनि कुनै काम आफ्ना योजनामा हुँदैनन् । तर जसरी हुन्छ गर्नै पर्ने बाध्यता रहन्छ । कुनै कामले ढुक्क बनाउँछ, शनिबार नुहाएजस्तै । कुनै कामले तर्साइरहन्छ, चोरेर खाएको दिन थाहा पाउँछन् कि भनेर तर्सिएको क्षण जसरी । सबै गरिने कामको पहिल्यै योजना पनि गरिँदैन । यो मानवीय गुण (अवगुण) हो भन्ने मैले मानेको छु । दाङमा पढेको स्कुलको नाम नै प्राथमिक विद्यालय थियो । त्योभन्दा अर्को चिनाउने नाम थिएन । माटोको भवनको पूर्वपट्टी ‘नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय’ लेखेको पुरानो बोर्ड भने थियो । पछि कसरी त्यहाँबाट ‘राष्ट्रिय’ हराएर गयो ? थाहा भएन । सोधिनँ पनि ।
कक्षामा पिउन दाइले एउटा रजिस्टर बोकेर ल्याए । ती दाइको नाम पालु थियो ।
नाम – पालु चौधरी
उमेर – २०/२१
शिक्षा – सावाँ अक्षर चिनेको
कक्षा शिक्षक गणित पढाउने एकजना विश्वकर्मा थरका थिए । रजिस्टर पाइसकेपछि के-के पढे सुनिनँ । तर, वार्षिक बिदा भनेको सम्झन्छु । सबैभन्दा मुख्य कुरा एक महिना दशैंतिहार बिदा भनेको सम्झन्छु । अरु कुरामा ध्यान गएन । कतिबेला स्कुल बिदा होला र उफ्रिन गइहालूँ भन्ने मनमा लागिसकेको थियो । एक महिने लामो बिदालाई हातका औंलाले गन्न थालेँ । जति गनेपनि दशभन्दा पर पुगेन गन्ती । दोहोर्याउन थालेँ । तेहेर्याएपछि बल्ल सकियो दशैं बिदा । मन खुश भो । आनन्द आयो । सु गर्न नपाएको बेला कुनै एकान्त ठाउँ भेटेर तुर्काएजस्तै आनन्द । तिर्खाएको बेलामा चिसो पानीले आँत भिजाएजस्तो आनन्द । त्यो पर्खाइ दशैंको थियो । त्यो पर्खाइको आनन्द बिदाको थियो ।
दशैं हरेक साल आउँछ । पहिलेपहिले बिस्तारै आउँथ्यो । हतार नगरी आउँथ्यो । झुसिलकिलाझैं आरामले आउँथ्यो । छेउमा आइसकेपछि सुन्दर पुतली बन्थ्यो । हामी केटाकेटी त्यही पुतली समाउन विद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डरमा रातो अक्षर खोजिबस्थ्यौँ । ती सुन्दर दिन थिए । ती खास दिन थिए ।
उमेर बढ्दै गयो । बढ्ने क्रम जारी छ । बढिरहन्छ । यसको कामै बढिरहनु हो । हामी पनि ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ बन्दै जान्छौँ । र एकदिन पक्का सीसाको टुक्राझैं टुक्रिजानेछौँ । थाहा पाउँदैनौँ । थाहा छ ।
बर्खे बिदाको एक महिना बिदा । लगत्तै तीज । तीजको फेरो समाएर आइपुगेको दशैं, तिहार र छठ । विद्यार्थीका लागि स्वर्णीम र प्रिय चाड हुन् यी । मामाघर जान पाइने, नयाँ लुगा लगाउन पाइने । पिङ खेल्न पाइने । टीका लगाएर पैसा पाइने । मनलाग्दी घुम्न पाइने । सरकारी स्कुलमा पढेकाले कहिल्यै ‘होमक’को भार भएन । बिन्दास चल्थ्यो बिदाका दैनिकीहरू । यी सबै कुराको रौनकता फरक हुन्थ्यो – जब सानो थिएँ ।
स्कुले जीवन सकियो । क्याम्पस पढ्न सहर आएँ – घोराही बजार । अर्कै मान्छे नयाँ साथी भए । गुच्छा खेल्ने कुरा भएन । कट्टु लगाएर कट्टु खोलामा (दाङको कटुवा खोलालाई स्थानीयले कट्टु खोला भन्छन्) पौडी खेल्न जाने कुरा भएन । क्याम्पसका कोठामा तास खेल्ने कुरा भएन ।
उमेरसँगै माग पनि बदलिए । पोस्टकार्ड खेलौँ भन्ने साथीहरू तास खेलौँ भन्न थाले । दूध, दही, मोही माग्ने साथीहरू बियर, भोड्का र चुरोटका गफ्फी भए । प्रसंगसँगै जीवनले पनि अर्कैअर्कै मोड लिन थाल्यो । प्लस टू सकियो, घोराहीको पद्मोदय कलेजबाट । पोखरा गएँ । क्याम्पस पढ्न बिबिएसमा भर्ना भएँ, पिएन क्याम्पसमा । देखेभन्दा ठूलो शहर रहेछ । ठूला ठूला पसल रहेछन् । अग्ला घर, अपार्टमेन्ट र सपिङ सेन्टर रहेछन् । कसैलाई कसैको चिन्ता छैन । आफ्नै मान्छे ठोकिएर हिँडेपनि फर्किएर हेर्न समेत फुर्सद छैन । म त्यसैको जालमा फसेँ, त्यही कालो भुमरीमा परेँ ।
शहरमा हेर्दाहेर्दै म पनि ‘फर्किएर हेर्नै नमिल्ने’ गरी व्यस्त बनेँ । अस्तव्यस्त बनेँ ।
पढाइको तनाव । कामको तनाव । अरु धेरै थोकको तनाव । घर नआएको वर्ष दिनभन्दा बढी भएछ । केही दिनअघि घरबाट फोन गरेर आमाले ‘दशैंमा त छुट्टी हुन्छ होला नी ?’ सोध्नु भएको थियो । अहिले बच्चामा जस्तो स्कुलको पत्यारलाग्दो दिनदेखि भाग्न अफिसमा रातो अक्षरको अंक छैन । न त जिन्दगीमा कुनै उटपट्याङ गर्न ‘यार’ छन् । सबै छन्, आफ्नै जिन्दगीको घोडा दौडमा छन् । सबैलाई जित्नु छ । कसैलाई हार्नु छैन । उनीहरु पनि मजस्तै आफैंसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
‘हुन्छ बिदा हुन्छ । अब सधैंको दशैंको म तपाईंहरुसँगै मनाउँछु,’ आमालाई फोनमै भनिदिएँ । र केही दिनपछि अफिसमा भनिदिएँ, ‘अब म जागिर छोड्छु । घर जान्छु । बुढ्यौलीले छुँदै गरेका मेरा बाआमासँग समय बिताउँछु । यो तनाव बोकेर जिन्दगी भोग्न चाहन्न । म शहरसँग हार स्वीकार्छु बरु । तर, घर जान्छु । मलाई घर जान दिनुहोस् । अफिसदेखि बिदाए दिनुहोस् ।’
घर पनि आइपुगेँ । यसपटकको दशैं एकदमै हतारमा आयो । अपर्झट आयो । अचानक आयो । कुनै हल्ला गरेन । रेडियोमा मालश्री बजेन । पसल तथा उद्योगहरूको विज्ञापन आएन । फेसबुकमा मान्छेहरूसँग गफिन छाडेको पनि धेरै भएछ । घरबाटो सोध्दै आउने ती अपरिचितले पनि बिर्सेछन्, यसपाली ठेगाना सोध्न आएनन् ।
हुन पनि अब त दशैं पनि दशैं जस्तो कहाँ रह्यो र ? त्यसमाथि यसपाली त झन् अनलाइन टीकाटालो गर्ने कुरा छ । कारणै तपाईंलाई पनि थाहै होला ! करिब ७ महिनादेखि क्यालेन्डरमा रातो रंगबिनै हामी लामो बिदामा छौँ । टीका लगाउन छोडिसकेँ । उसो त म कहिल्यै रातो टीका लगाइनँ । नलगाउँदा कोही बुद्धिस्ट हो ? भन्छन् । कोही क्रिस्चियन हो ? सोध्छन् । उनीहरूलाई भन्छु, ‘म मान्छे हुँ । मेरो कुनै धर्म छैन ।’
दशैं दैलोमा आइसक्यो । रौनकता छैन । दशैं पहिचान लामो बिदा थियो । त्यो पनि हरायो । कवि तथा संस्कृतिविद् तीर्थ श्रेष्ठ दाइले भनेको कुरा सम्झिरहेको छु, ‘दशैं तयारी चाउचाउजस्तो भो । बजारमा गयो । किन्यो ल्यायो । बिदाइ गर्यो ।’ साच्चै कति छिटै आएको यो दशैं ?
कम्तिमा बालापनमा जस्तै क्यालेन्डरमा रातो रंगमा रंगिएर आएको भए म पनि दशैं तयारी गरेर बस्थेँ होला …….
विकास रोका मगर
एक सन्ध्या मेलिनासँग
ईश्वर, आऊ बन्दुकको खेल खेलौँ !
दुई प्याक शराबी कविता
ब्ल्याक होलभित्रको उज्यालो !
दशैं र खलबल (भाग-१ ) : जमरा देखि...
रमेश विकल वाङ्मय पुरस्कार शान्तदास मानन्धरलाई प्रदान गरिने
दोज लक्की सेभेन्टिन्ज !
१७ पाठकलाई नगरकोटीको उपहार ‘कल्पग्रन्थ’
स्टेजिङ एण्ड ब्लकिङ | टलकजंग vs टुल्के